कक्षा १२ को नतिजा दश दिनभित्र सार्वजनिक गरिने ! « MNTVONLINE.COM
कक्षा १२ को नतिजा दश दिनभित्र सार्वजनिक गरिने !
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा १० दिन भित्रमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । पुस भित्रैमा नतिजा प्रकाश गर्ने तयारी गरेको भएपनि विद्यालयबाट आएको विवरण मिलाउन समय लागेकाले नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको बोर्डले जनाएको छ ।